Prostar ayaa ku OEM & ODM Services tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1998. Iyada oo waayo-aragnimo qani ah oo leh macaamiisha looga qabto ka adduunka oo dhan, Prostar ogyahay sida ay ugu adeegaan macaamiisheena ugu fiican ahaanayta iyo waxaa si cad loo yaqaan mid ka mid ah bixiyaha Customization ugu wanaagsan ee warshadaha ee.
Marka la barbar dhigo saarayaasha kale oo badan, Prostar ayaa our R gaar ah & waaxda D, kooxda injineernimada iyo qeybinta tooling. The unugyada ganacsiga shakhsi prvide shaqo-buuxa R & D on hardware iyo software inay buuxiyaan shuruudaha OEM & ODM.
Prostar dhab ah ayaa aaminsan in a adeeg wanaagsan macaamiisha waa neccessary. Sayidka, Prostar dan badan oo ku saabsan ka-iibka ka dib iyo provids daaqad wakhti buuxa. Dhammaan macaamiisha kuwa ku gatay ka Prostar ka heli karto taageero waqtigii by naga tagay fariin ama wacaya our macaamiisha hotline webpage Support ka.